Greece - lizwe, okuyinto lihlotshaniswa izivakashi Russian hhayi kuphela ukusuka olwandle efudumele, nelanga elikhanyayo futhi intuthuko izitsha kazwelonke, kodwa futhi nezinga European yesevisi osezingeni eliphezulu kakhulu ingqalasizinda iholide. Kuyinto izwe tinganekwane ifa ocebile zamasiko. Izivakashi eziningi ayizange umbuzo oluthandwa i uhambo okunye. Nokho, lesi simo kungenzeka ezihlobene isidingo ukunquma indawo ukuhlala Greece enhle. Kuleli zinga usebenza lenqwaba amahhotela anikeza izinkonzo zabo ezihlukahlukene amanani amabanga nezigaba izinga. Uma sikhuluma kumasegmenti phakathi premium, izivakashi eziningi ukuphuma for a eziyinkimbinkimbi ehhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela. Yiziphi izici zalo?
Porto Carras Sithonia Ihhotela - 5-ihhotela lezinkanyezi, elakhiwa ngo-1978. Kwakuthinta kabusha ngo-2002. isakhiwo salo samanje kwelinye izindlu 6 izibuya. Ihhotela isendaweni Sithonia inhlonhlo engxenyeni esentshonalanga ye-ke. It sizungezwe yeminqumo, nezivini. Budebuduze Porto Carras Sithonia Ihhotela (5 star) marina elise Porto Carras Marina yakhelwe ukuze kuhlaliswe yezikebhe yangasese. Kungaba ukubamba 315 izikebhe. Beka umkhawulo ubude umkhumbi, okuyinto ihlanganise kungaba bay -. 55 m itholakala at ibanga km 110 kusukela Thessaloniki. Ngo eduze eziyinkimbinkimbi hhotela edolobhaneni Neos Marmaras.
Uyini ehhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 *? Izithombe of the complex - ngezansi.
Siyabona ukuthi lena eziyinkimbinkimbi esine eliphezulu yezakhiwo nengqalasizinda ekwakheni umqondo okumangalisayo ukuphumula.
Porto Carras Sithonia Ihhotela (5 izinkanyezi) - ehhotela esine ingqalasizinda evuthiwe, kudingekile ukuhlala ukhululekile. Phakathi enhle kakhulu: insiza yayo:
- amachibi - ichibi livuliwe, okuyinto ugcwele amanzi olwandle, ivaliwe, izingane;
- zokudla, nemishayo, cafe, Tavern;
- ukuhambisana namazinga omhlaba emkhakheni igalofu (kuso kukhona izimbobo 18);
- Isikhungo sezempilo;
- Igumbi lenkomfa;
- samabhizinisi (inikeza ukufinyelela i-Inthanethi amasevisi, ukuskena, ukunyathelisa, ngokwenza amakhophi, ngokuqoshwa ukuthumela imilayezo ngefeksi);
- esitolo ubucwebe;
- car yokupaka.
Manje ukufunda ngqo isibalo amakamelo ehhotela.
Porto Carras Sithonia Ihhotela (5 izinkanyezi) - Ihhotela eziyinkimbinkimbi, ogama isakhiwo - 477 amakamelo. Kulawa, 342 amakamelo ukubukwa kolwandle, futhi 135 - endaweni yokudlala igalofu. Izinhlobo eziyinhloko amakamelo: Standard, Junior, Umkhaya, Small, Deluxe, Presidental. Amagumbi nazo oluthathwa esekelwe endaweni.
Ngakho, ihhotela linikeza zamagumbi Uphakeme. endaweni yabo - 23-26 square metres. m. Kuzo kukhona ababili noma 2 imibhede olulodwa, usofa, ifenisha, mini-bar, TV, ucingo, ephephile. It has konke okudingayo ukuze yokugezela - umshini wokomisa izinwele, amathawula. Igumbi ngalinye has a emphemeni inhlobo efanele. Emakamelweni yohlobo kubhekwe kungaba kanyekanye ihlanganise ezintathu womuntu.
Amagumbi Suite Junior ngaphezulu, banezizathu endaweni 28 square metres. m. Banezinhliziyo embhedeni kabili, usofa. Nokho, igumbi lihlukaniswe by umnyango beya. Ngezinye anawo isivakashi - izinto efanayo odlule lwekamelo. Ibekwe Junior Suite kungaba futhi abantu abangu-3. Uphakeme Igumbi Umkhaya zamagumbi zenzelwe iholidi baye imikhaya, inhlangano yokuhlala - 2 abadala nezingane 2. Kulesi Igumbi ibekwe 1 umbhede double futhi 2 olulodwa, futhi ahlukaniswe umnyango beya.
Ohlonishwa kakhulu futhi ezinkulu endaweni amakamelo ehhotela - Suite Executive (endaweni yabo -. 48-57 square metres) futhi Deluxe Suite (banayo indawo 60-94 sq M.). Banezinhliziyo lokulala ehlukile, ifakwe embhedeni kabili futhi egumbini lokuphumula. Lezi amakamelo zenzelwe ukukhokhela abantu abangu-3.
Isakhiwo ehhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela (5 star) inikeza ngamasevisi alandelayo ukhiye: ilondolo, igumbi inkonzo, njalo ushintsho nelineni. Yiqiniso, ihhotela linikeza ezihlukahlukene namasevisi ahlobene esekelwe ingqalasizinda ekhona - ikakhulukazi, singaxoxa mayelana namasevisi samabhizinisi.
Ihhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela (5 izinkanyezi) inikeza Catering Services kanje:
- ibhulakufesi nesidlo sakusihlwa (sifaka ibhulakufesi kanye dinner);
- zonke okufakayo (sifaka kwasekuseni, kwasemini kanye dinner e lezitsha style).
Uma isivakashi ekhetha inketho iIgama yesibili, izikhathi ngesonto mahhala kwasemini at White Room, kanye idina endaweni yokucima ukoma Pergola. abahambi Abaningi ukukhetha ihhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (izimpendulo zezivakashi eziningi ukuthi uqinisekise lesi) ngenxa yokuthi insimu yalo noma eduze kwakhona zokudlela eziningi cuisine zikazwelonke nezamazwe ngamazwe. Phakathi kwalabo:
- Izindaba Cafe (abalisebenzisayo, emelela cuisine yamazwe ahlukene);
- Crystal sika (yokudlela, alinikela ukubukwa-panoramic kolwandle);
- Athos (ngesiGreki, cuisine international);
- Pergola (esisogwini elibheke olwandle, ke ihlelwe uhlelo self-service, ikhonza izitsha isiGreki iMedithera);
- Pefko (futhi esisogwini olusentshonalanga, ke ubumnandi ukuchitha abathandi isikhathi cuisine kazwelonke);
- Mediterraneo (kubhekwe main esizeni Sithonia, ngokukhethekile cuisine isiGreki international);
- L'Orangerie (awusebenzelayo basePolynesia ekhishini Uhlelo usebenza ku a la Carte) ;
- Marina (e yayo enkulu nenhlanzi izitsha akhonzwa);
- Zefyros (ukudla Italian);
- Ambelos (izitsha kazwelonke asizwa ke);
- Hole 19 (yokudlela, alinikela ukubukwa yomdlalo igalofu igalofu).
Ukudla kwasekuseni ehhotela izivakashi ihlelwe Sithonia kusuka 7:30 kuya 10:30 am Lunch - 12:30 kuya 14:30 Dinner - 19:00 kuya 21:00. Ngokuvamile, bonke ukudla ezintathu aphethwe yokudlela main. Njengoba siphawulile ngenhla, kanye ngesonto kukhona ehlezi ekudleni ethaveni Zefyros futhi Ambelos. Ukuze izivakashi zikhishwa Ungadla - esikhathini kusuka 11:00 kuya 12:30, itiye, ikhofi kanye amaswidi - kusuka 15:30 kuya 17:30, kusihlwa Ungadla - kusukela 23:30 kuze kube phakathi kwamabili. Ibha, etholakala eduze kwechibi kubha wokubawa abantu bayisekele, e ezihlukahlukene iziphuzo etholakalayo.
Ihhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (izimpendulo lezihambi eziningi uyakufakazela lokhu) engumnikazi ebhishi ehlanzeke, lapho izakhamuzi zonke izesekeli ezidingekayo ayatholakala. Ngaphandle kwendawo lolwandle, okuyinto kungokwenkampani ehhotela, ubude ingqikithi ogwini eduze, aguqulelwe ukubhukuda amaholide, kumayelana 10 km.
Uhlelo lokuzijabulisa eyayihlelwe Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (isihambi Izibuyekezo mayelana nalo mdlalo) ingashintshwa ukuze baphumule njengoba izivakashi omdala nezingane. Ngakho, ngokuphathelene ukuphumula izivakashi kancane - bayohlala ukujatshuliswa sabafundisi abangomakad 'ebona, kuyilapho abazali ukuchitha isikhathi kwezinye izindawo. Izingane letingabhukusha echibini, ukudlala ku inkantolo. Babephinde babizwe ubungazwa iqembu elihlukile Animators.
Kubantu abadala esizeni Uyi Tinhlobo yokuchitha isizungu etholakalayo. Ezemidlalo abalandeli avulekele: ithenisi enkantolo, insimu webhola, ebaleni lokudlala i-volleyball, ejimini. It has konke okudingayo ukuze amanzi ezemidlalo - ezifana diving. Kungenzeka ukugibela ihhashi, ukuqasha ibhayisikili entabeni.
Ihhotela inezidingo kahle isikhungo yayo nge endaweni komyalelo wokungabi ayizinkulungwane 4.7 sq. M. m Inikeza izinsizakalo kwezilandelayo .:
- thalasso echibini;
- massage nge zokugeza okufudumele amanzi olwandle;
- Physiotherapy - ngamanzi olwandle;
- alawo machibi aseRoma;
- amakamelo nge air ionized;
- Ukwelapha ngetshe;
- evuthayo yokubhukuda;
- ibha wokwehlisa umzimba;
Kubathandi disco amaqembu ihlelwe, ohambisana ukuzijabulisa. Okunye izindawo zihlanganisa ekhasino, slot machines.
Funda ukuthi izivakashi uthi owakhetha kule ndawo njengoba Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (Sithonia, Neos Marmaras). Traveller Izibuyekezo kungenziwa oluthathwa zibe lezo ezihlobana ophilayo induduzo egumbini, ekuhloleni izinga ingqalasizinda ehhotela, ezingeni yenhlangano lokuzijabulisa, lolwandle izinga ingqalasizinda, ezingeni yenhlangano kwamandla, ikhwalithi yemisebenzi enikelwa. Sizokwenza ukufunda imininingwane yabo ethize.
izivakashi eziningi Russian waqaphela ukuthi wakhetha ihhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (Halkidiki), elinde ngaphezu kwakho konke kutfotjelwa aphambili isimo salo izinhlangano yaseYurophu okunye ehhotela. Ukwahlulela ukubuyekezwa, abahambi ngokuvamile ukuhlola izici efanele lokuzijabulisa eliphezulu kakhulu. Amagumbi anawo eziyinkimbinkimbi ehhotela, izivakashi echazwe njengo ivulekile, stylish, yesimanje, ifenisha ukhululekile.
Isebenze air conditioner, nezinye zikagesi kanye izesekeli akubangi izikhalazo ezivela izivakashi ezivela WaseRussia. abahambi Abaningi agcizelele ubuhle ifomu, ephumela kusukela amafasitela amakamelo - kungakhathaliseki yokuthi ivula amehlo - yokudlala igalofu noma ulwandle.
Phakathi amazwana esivamile mayelana Sithonia Ihhotela - labo abonisa imibono izivakashi kungqalasizinda. Make izingxenye zalo, ezixhunywe nenhlangano ukuzijabulisa, imisebenzi ezemidlalo, ukuhlinzekwa kwemisebenzi ethile, balinganisela abahambi kakhulu subjective. Okuningi kuxhomeke kulokho okwenzeka odlule okuhlangenwe nakho komuntu othile ingxenye isipiliyoni saseMelitha eziphilayo nokuthi kukhona yokuchitha isizungu kunalokho qhathanisa e Sithonia ehhotela.
Ngempela, kwabanye abahambi Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (Sithonia) Ihhotela indawo geography, okuyinto lihlotshaniswa abathandi abaningi ulwandle amahhotela ophambili kuhilela kumiswa yinto entsha ngokuphelele-aspect kokusebenzisa lawo noma kwamanye amasevisi, kukhethwa ongakhetha ahlukahlukene yokuchitha isizungu. Labo abathanda amaholide isenzakalo sasogwini lolwandle esifunda bangase bavakashe ezindaweni ezifana Sithonia, ngokokuqala ngqa, mancane amathuba okuthi setha ezibucayi kwehhotela ingqalasizinda ezingeni ukuhlolwa. Ngakwelinye ihlangothi, labo izivakashi engibathandayo ezindaweni ezifana Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (Sithonia, Neos Marmaras) ajwayelekile, ngokuqinisekile kuyoba kancane abaqotho amaphutha okungenzeka lapho usebenzisa le noma amanye amasevisi ehhotela.
Kodwa, noma kunjalo, amaRashiya, ushiya impendulo online, khomba isipiliyoni uyahlanganyela e Sitonia Ihhotela ngokuvamile ukuhlola ingqalasizinda eyinkimbinkimbi njengoba sokuhambisana ezindinganisweni eziphakeme-aspect design, izinga izakhiwo lezinto ezihlukahlukene, futhi ngokuya namasevisi ezihambisana nokusebenza izikhungo ezithile zitholakala esizeni. Greece, Ihhotela Porto Carras Sithonia Ihhotela (5 star) ngokukhethekile, ngokuvumelana imibono zivakashi ehambisana eliphakeme induduzo, ukuzilibazisa.
Esinye isici Izibuyekezo - ukuhlela ukuzijabulisa for the izivakashi.
Amazwana ngenhlangano lokuzijabulisa
Ubunzima main ukuqaliswa, cishe kunoma iyiphi izinhlelo ehhotela ukuzijabulisa Mediterranean - isidingo ukuhlanganisa la, nobe kuleminye imisebenti ofanelana abantu bobudala obungefani namaqembu omphakathi. Akulula ukuba hlela iphathi bese disco ensimini eyayihlala izivakashi abaye beza Greece ukuchitha isikhathi isigqi elinganisiwe lweholide okuphumuzayo. Labo amahhotela ukuthi uphathe ukuxazulula umsebenzi onzima kangaka, kukhona ngendlela emangalisayo kukhanga izivakashi ngenxa yokuthi intshisekelo okunamandla abahlala kuzo lukhula amaqembu amaningana nomphakathi.
Waphumelela kangakanani yini engenzeka ukuze athole ukuhambisana izithakazelo izihambi ngubani bathanda, ngomqondo ongokomfanekiso, amaqembu elikhulu, labo abakhetha iholidi ethule, ihhotela Sithonia? Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi isiRashiya, lokhu inkinga isixazululekile ngempela ngempumelelo. Okokuqala, ngenxa yokuthi indawo izindawo ingqalasizinda ehlukahlukene e-eziyinkimbinkimbi ithengiswe izivakashi njengoba abaningi becabanga kanjalo, ngokwanele abanekhono ngokuya ukwahlukanisa izindawo ngempumelelo "enomsindo" lendawo ohlala zezivakashi ujabulele ukuthula. Okwesibili, labo bayathanda iholidi ehhotela ethule njalo has kokukunikela njengenhlangano yokuchitha isizungu okunye kule eziyinkimbinkimbi Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * - Uhambo isibonelo.
Ngakho, izivakashi, kungakhathaliseki ukuthi izintandokazi subjective, sibonga ezihlukahlukene izinhlelo ukuzijabulisa e Sithonia ehhotela bangathembela imizwelo eyakhayo kakhulu inqubo zokuzilibazisa.
Izibuyekezo kwengqalasizinda ebhishi
Izwe, esemgwaqweni e Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 *, Greece, ezihambisana ezivakashini Russian kwasekuqaleni ukuba ubukhazikhazi emabhishi. Ngakho amaholide eza Sithonia ehhotela, okokuqala ulindele izinga eliphezulu ezifanele izinga ingqalasizinda. Ukwahlulela ngokubukeka ukubuyekezwa lezihambi abavela eRussia, ebhishi bendawo ukuhlangana ngokugcwele lokho abakulindele.
Eduze ehhotela - ugu ivulekile isihlabathi acwebile ezimhlophe, ulwandle afudumele, nelanga elikhanyayo. Zonke izesekeli ezidingekayo like izivakashi ithi, banikwa ngaphandle nobunzima kakhulu - nakuba abaningi abakujabuleli kakhulu neqiniso lokuthi la masevisi ayatholakala for imali eyengeziwe. Nokho, inketho okunjalo - indinganiso zokungcebeleka amaningi aseMedithera. Ngakho-ke, lezi imicabango yabantu ayikwazi kubhekwe nangokunembile ezimbi, kunalokho, babonisa izifiso subjective lezihambi ethize.
Ngokuphathelene inhlangano amandla Sithonia ehhotela - akukho izikhalazo ezinkulu ngokuphathelene lesi sici sokuzijabulisa izivakashi Russian, nahlulele by ukubuyekezwa, musa ukulungisa. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe esinye sezici. Okuthile nge zazo ehambisana izivakashi Russian Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 *, Sithonia, Neos Marmaras (izibuyekezo uqinisekise lesi) - intuthuko ukudla ngakhonza zokudlela wendawo. Izivakashi WaseRussia waqaphela ukuthi ngezindlela eziningi abazikhethayo leli hhotela kwakubangelwa nje ezihlukahlukene efanayo zokudlela onguchwepheshe izitsha isiGreki European kanye cuisine kusuka kwamanye amazwe.
Impendulo ikhwalithi yamasevisi
Ngakusasa isici esibaluleke kunazo inhlangano yokuzilibazisa, okuyinto badonsekela ukunakwa izivakashi - ikhwalithi ku-site amasevisi. Umbono wakhe ngokuvamile kusekelwe efanayo siye eshiwo ngenhla regularities ezihlobene ingqalasizinda. Labo abantu engibathandayo Ukuvakashela Porto Carras Sithonia Ihhotela 5 * (Sithonia) - ngowokuqala kungenzeka abaqotho eminye amaphutha izinga lenkonzo. izivakashi abanolwazi, esikhundleni salokho, kungenziwa amisiwe ukuhlonza amaphutha abasebenzi ehhotela asiqokomisa ngaphezulu. Futhi lokhu zingachazwa ngezinqubo umehluko nezilinganiso izinga lenkonzo ukuthi ngezinye izikhathi kubonakala ukubuyekeza lezihambi, khomba isipiliyoni uyahlanganyela kwezinye eziyinkimbinkimbi ehhotela. Nokho, ukusabela izinga lesevisi e Sithonia ehhotela ku-Russian ezinezihloko inthanethi inthanethi omuhle kakhulu.
Ngakho, Sithonia ehhotela - phakathi Greece yodumo zanamuhla. Ngesikhathi esifanayo uzama, ngokuvumelana inqubomgomo zamanani, ukuba kufinyeleleke izigaba ezahlukene lezihambi. Ngakho, kwezinye izimo, izivakashi unethuba ukuthenga ithikithi ePorto Carras Sithonia Ihhotela 5 * okukhethekile - okungukuthi, ne isaphulelo ezinhle. Into esemqoka - ukugcina umkhondo izenzo ezinjalo ngokusebenzisa isevisi yokubhuka inthanethi. Ngaphezu kwalokho, ihhotela sisonke ibekwe njengoba elihambisana isilinganiso lebanga lentengo. Kuyinto kunenzuzo ikakhulukazi ngokusho kwabanye ukubuyekezwa, uye endlini yakho noma abangane. Nakuba Yiqiniso, odume kunayo namakamelo awo kungaba yizindleko ezinkulu.
izivakashi isiRashiya, ngisho noma ngesikhathi ivakashele ehhotela Sithonia zazinolwazi eside uyahlanganyela ngesikhathi zokungcebeleka Mediterranean, weneliseka inkonzo, iqophelo lengqalasizinda, izinga lenkonzo ehhotela. Phakathi kwezici ezikhanga kakhulu sokungcebeleka Sithonia, nahlulele by ukubuyekezwa - ezihlukahlukene zokudla ukuthi ukulungiselela izitsha okumnandi cuisine isiGreki omhlaba.
Ihhotela kuyinto ngqo ezincikene amabhishi emangalisayo isihlabathi elihlanzekile elimhlophe. Abasebenzi be-eziyinkimbinkimbi ihhotela lizokubuyisela ahlele ukuzijabulisa izivakashi e ezihlukahlukene ebanzi. Kungaba nesikhathi omkhulu njengoba abalandeli anomsindo, kanye labo abakhetha a kulinganiswa, iholide unhurried. Ngakho, Sithonia ehhotela - ukukhetha omkhulu isihambi, kungakhathaliseki izintandokazi zayo mayelana ngezindlela ka ukuchitha isikhathi.